ज्योति विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २६ चैत २०७७)
२०७७ चैत, २६
लगानी कम्पनी विश्लेषण
बैंकको शेयर मूल्य बुधवार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. २६३ पुगेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयर ४ लाख ५० हजार १७३ कित्ता शेयर खरिद विक्री भएको हो ।
बैंकले १२ लाख ८७ हजार ८८४ कित्ता संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरेको हो । बैंकको शेयर संरचना संस्थापकतर्फ ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको हो । उक्त बोनस शेयर बैंकले शेयरधनीको डिम्याट खातामा पठाइसकेको छ । गत पुस २८ गतेसम्म अभौतिकीकरण गराएका शेयरधनीको डिम्याट खातामा बोनस शेयर पठाइसकेको छ ।
उक्त मितिपछि शेयर अभौतिकीकरण गराएका शेयरधनीहरूको हकमा पनि क्रमशः शेयर पठाउने र हालसम्म पनि शेयर अभौतिकीकरण नगरेका शेयरधनीले शेयर अभौतिकीकरण गराएपछि मात्र हितग्राही खातामै बोनस शेयर जम्मा हुने बैंकले जानकारी गराएको छ ।
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा टुप्पी र पुच्छर भएको सेतो मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ८० दशमलव १८ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ११ दशमलव ६१ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । बुधवारको शेयर मूल्य रु. २६३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. २४४ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यो शेयर मूल्य ६१ दिनयताकै उच्च हो ।
कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)[२०७८ बैशाख, २]
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)[२०७८ बैशाख, २]
कामना सेवा विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)[२०७८ बैशाख, २]
मुक्तिनाथ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)[२०७८ बैशाख, २]
सिन्धु विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १ वैशाख २०७८)[२०७७ बैशाख, १]
संगीतका साधनमा आत्मनिर्भरता